လက်ဖဝါးပေါ်က “X”အက္ခရာ (သို့) ဂမ္ဘီရ ကြက်ခြေခတ် ပါလာသူတွေရဲ့ နက်နဲသော ကံကြမ္မာ… – Pwintsan
လက်ဖဝါးပေါ်က “X”အက္ခရာ (သို့) ဂမ္ဘီရ ကြက်ခြေခတ် ပါလာသူတွေရဲ့ နက်နဲသော ကံကြမ္မာ…
ဒီနေ့ပြောပြချင်တာက လက်ဖဝါးပေါ်က”X”အက္ခရာ(သို့) ဂမ္ဘီရ ကြက်ခြေခတ် ပါလာသူတွေရဲ့ ကံကြမ္မာအကြောင်းပါ။ ယေဘု ယျအားဖြင့် လူဦးရေရဲ့ ၃ရာခိုင်နှုန်းလောက်မှာပဲ ဒီအမှတ်လက္ခဏာပါလာတတ်တာပါ။
လူဦးရေ၂သန်းလောက်ကို သုတေသနလုပ်ခဲ့တဲ့ အနောက်တိုင်းသုတေသီတွေအဆိုအရ ဒီကြက်ခြေခတ်ပါသူတွေရဲ့ ကံကြမ္မာဟာ အရာရာမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
တချို့သုတေသနတွေကတေ့ာဆိုးကျိုးတွေကိုလည်းချပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ အနောက်တိုင်းနဲ့ ဗမာအယူအဆနှစ်မျိုးလုံးကို ဒီဆောင်းပါးမှာ ပြောပြသွားပါမယ်။အစီအစဉ်တွေမချပဲအောင်မြင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်….
သူများတွေကဘဝမှာ အောင်မြင်ဖို့အတွက် အစီအစဉ်တွေချမှတ်ပြီးခဲရာခဲဆစ်လုပ်ရတတ်ပေမယ့် ဒီ”x”အမှတ်ပါတဲ့သူတွေက တော့ သူတို့ဘဝမှာ အစီအစဉ်တွေ ချစရာမလိုပဲ အောင်မြင်နေတတ်ကြတာပါ။
သူတို့ရဲ့ ကံကြမ္မာအရကို ဘာအစီအစဉ်တွေချဖို့မလိုပဲ သူတို့လုပ်ချင်ပြီဟေ့ဆိုပီး ထလုပ်ရင်” သူတို့က အကြီးမြတ်ဆုံးသောအရာတွေကို လုပ်နိုင်စွမ်း ရှိနေကြတာမျိုးပါ။
ဒီလိုပါရမီရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေက သူတို့မသေဆုံးခင်မှာ အကြီးမြတ်ဆုံးသောလမ်းကြောင်းတွေကို ပြောင်းလဲရှာဖွေတွေ့ရှိသွားတတ်ကြပါတယ်။
ဒီလို”x”ပုံစံ ဂမ္ဘီရ ကြက်ခြေခတ်ပါတဲ့သူတွေက ဝမ်းတွင်းစိတ် ဒါမှမဟုတ် အလိုလိုသိစိတ် ပါလာတတ်ကြတာပါ။ သူတို့ကိုလိ မ်လို့မရပါဘူး။
သူတို့ကအရာရာတိုင်းကို အသေးစိတ်သတိထားမိတတ်ပြီး သစ္စာတရားကိုတန်ဖိုးထားကြပါတယ်။ သူတို့ကိုလိမ်နေတာနဲ့ချက်ချင်းသိလောက်တဲ့အစွမ်းမျိုးပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေပါ။ သူတို့ကထိုးထွင်းသိစိတ်အရမ်းမြင့်မားပါတယ်။ ပြောရရင် ဆဌမအာရုံသဘောမျိုးပါပဲ။
သူတို့ကသူတို့ဘဝကို ပြောင်းလဲနိုင်သလို တခြားသူတွေရဲ့ ဘဝကိုလည်း ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။ သူတို့ကို လေးစားအားကိုးကြတဲ့အတွက် လူတွေကိုကူညီဖို့ သူတို့တွေ ပင်ပန်းနေရတတ်ပါတယ်။
ငယ်ငယ်က ချမ်းချမ်းသာသာမနေရရင်တောင်သူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာမှာ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကျန်းမာချမ်းသာအောင်နေရပါတယ်။ အချစ်ရေး အိမ် ထောင်ရေး သာယာမှုနည်းတတ်ပြီး သူတို့ကို သိပ်ချစ်ကြပေမယ့် ကွဲမနေရင်တောင် ခွဲနေရတတ်ပါတယ်။
ဒီအမှတ်အသားပါလာရင် လူတွေအတွက် ကိုယ်ပင်ပန်းစိတ်ပင်ပန်းရတတ်ပါတယ်။ လူအများအားကိုးခံရပါတယ်။ ထူးခြားတဲ့ အိမ်မက်တွေမြင်မက်တတ်ပါတယ်။ လူကောင်းဟုတ်မဟုတ် ချက်ခြင်း ခွဲခြားသိမြင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီ”x”လက္ခဏာပါလာသူတွေဟာ မကောင်းတဲ့ သမာအာဇီဝမကျတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ဆို မအောင်မြင်တတ်ကြပါဘူး။ ပြောရရင် အကုသိုလ်အလုပ်တွေဆို ဘာတစ်ခုမှ အကျိုးမပေးပါဘူး။
ဒီကြက်ခြေခတ်ပါလာသူတွေအတွက် မကောင်းတဲ့ သတင်းကတော့ အက်ဆီဒန်းပေါင်းစုံကြုံနိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ရေနစ်တာ၊ မီးလောင်တာ၊ ဓါတ်လိုက်တာ၊ ဆိုင်ကယ် ကား အက်ဆီဒန်းဖြစ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူတို့က သေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူများလက်ချက်နဲ့ဘယ်တော့မှမသေသလို အက်ဆီးဒန့်တွေကြောင့်လည်းသေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အခက်အခဲတွေဘယ်လောက်ကြုံကြုံနောက်ဆုံးမှာ ကူညီသူတွေရောက်လာပါတယ်။
ရှေးဟောင်းကျမ်းတွေအဆိုအရတော့ ဒီလက်ဟာ သူတော်ကောင်းလက်လို့ဆိုကြပါတယ်။ သူတို့က လောကဓံတွေကြုံတွေ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာ တရားထူးတရားမြတ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားတတ်ပါတယ်။
ဆိုလိုတာက တကယ်သာတရားကျင့်ကြံမယ်ဆို သောတပန်အဆင့်လောက်ထိသွားနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တတိယအရွယ်လောက်ရောက်မှ ဘဝရဲ့အေးချမ်းငြိမ်သက်မှုတွေကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
တချို့တွေက ဒီလက္ခဏာပါရင် အကောင်းဆုံးတွေပဲဖြစ်မယ်လို့ ထင်မှတ်မှားနေတတ်ကြလို့ သုတေသနတွေရှာဖွေပြီးပြောပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ဟာ သွားပုတ်လေလွင့်ပြောတာ၊ မကျေနပ် အငြိုးဖွဲ့ခံရတာ၊ အချုပ်အနှောင်ခံရတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရှေးဟောင်းကျမ်းတွေအဆိုအရ ဒီလက္ခဏာပါလာသူတွေဟာ ကြီးမြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်ဖို့ မွေးဖွားလူသူတွေလို့ဆိုပါတယ်။
အနောက်တိုင်းပညာအရ အက္ခရာ”x”ပါလာသူတွေကိုတော့ ဒီလိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အလွန်အောင်မြင်သောသူ ၊ အားလုံးထဲတွင်အပြောင်မြောက်ဆုံးသောသူ အကြီးမြတ်ဆုံးသောခေါင်းဆောင်များ သေပြီးသည့်နောက်တောင်လူတွေမမေ့နိုင်သောသူများ ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ သုတေသနကိုတော့ ရရှား မော်စကို STI တက္ကသိုလ်က လူပေါင်း ၂သန်းကျော်ကို သုတေသနလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ “Xအက္ခရာနဲ့နက်နဲသောကံကြမ္မာများ”ဆိုပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ သုတေသနအရဆို ဒီ”X”လက္ခဏာပါသူတွေဟာ ဿမန်လူတွေထက် အထူးခြားဆုံး အနက်နဲဆုံး အဆန်းကြယ်ဆုံးသော ကံကြမ္မာတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ကဲ..ဒီလောက်ဆို “X”အက္ခရာ (သို့) ဂမ္ဘီရကြက်ခြေခတ်အကြောင်းသိလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ သင့်မှာရောပါလား။ တကယ်လို့ပါခဲ့ရင် ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာတွေနဲ့တူရဲ့လား မျှဝေပေးသွားပါဦး.
#Lifestyle_Myanmar / #Mg_Htet / REF_Spiritualunite.com